ဆောငျးပါး | လီဗာပူးက ဘာလို့ အပွောငျးအရှမှေ့ာ ငှတေပွားသုံးဖို့တောငျ ခြှတောနသေလဲ - Sports Home Time
ဆောငျးပါး | လီဗာပူးက ဘာလို့ အပွောငျးအရှမှေ့ာ ငှတေပွားသုံးဖို့တောငျ ခြှတောနသေလဲ
UNICODE – နှဈေေးကှကျအတှကျ ပွိုငျဘကျအသငျးတှကေ အရူးအမူး လုပျရှားနသေလောကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံကွီး လီဗာပူးကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ရှိလှနျးလှပါတယျ။ ဥရောပခနျြပီယံ၊ ကမ်ဘာခနျြပီယံနဲ့ အင်ျဂလနျခနျြပီယံတှအေဖွဈ ဗိုလျဝငျခံထားတဲ့ လီဗာပူးရဲ့ ရှဆေ့ကျမယျ့ အစီအစဉျက ဘာတှလေဲ။
လူမှုကှနျယကျမှာ လီဗာပူးပရိသတျတှကေ ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူဖို့ အသငျးကို တောငျးဆိုပမေယျ့ အသငျးနဲ့ မနျနဂြောကလောပျ့တို့က တညျတညျငွိမျငွိမျရှိနခွေငျးက ဘာတှကွေောငျ့လဲ။ ဒါနဲ့ ပကျသကျလို့ တယျလီဂရပျရဲ့ လီဗာပူးသတငျးထောကျ Chris Bascombe က ဖွရှေငျးမှု ပွုလုပျသှားပါတယျ။
လီဗာပူးအသငျး ဒီရာသီ အပွောငျးအရှေ့ ဈေးကှကျမှာ ငွိမျသကျနတောက ဒီအကွောငျးပွခကျြတှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
တယျလီဂရပျ မေး – ကလော့ပျက ရာသီသဈမစခငျမှာ ကစားသမား ချေါယူမှုတှေ လုပျလိုနသေလား?
Bascombe ဖွေ – လုပျလိုပါတယျ။
မေး – အဲ့အတှကျကော ကလော့ပျမှာ ရှေးခယျြချေါယူလိုတဲ့ ကစားသမားတှရှေိနလေား?
ဖွေ – ရှိပါတယျ။
မေး – လယျလာနာနဲ့ လိုဗရနျတို့ ထှကျခှာသှားပွီး ရှာကှီရီပါ ထှကျခှာနိုငျဆဲ အခွအေနမှော အသငျးလူစာရငျး တောငျ့တငျးလာဖို့အတှကျ အငျအားဖွညျ့ဖို့ လိုအပျမယျဆိုတာကိုကော ကလော့ပျက သတိပွုမိရဲ့လား?
ဖွေ – သူ ဒါကို ကောငျးကောငျး သတိပွုမိပါတယျ။
မေး – လူစာရငျးကို အငျအားဖွညျ့ဖို့နဲ့ အသငျးလူစာရငျးကို ပွနျတညျဆောကျဖို့ ဈေးကှကျဖှငျ့နခြေိနျထကျ ပိုကောငျးတဲ့ အခြိနျမြိုး မရှိဘူးဆိုတာကိုကော ကလော့ပျက သတိပွုမိရဲ့လား?
ဖွေ – အသအေခြာကို သတိပွုမိတာပေါ့။
မေး – ဒါဆိုရငျ လီဗာပူးက လူသဈတှခေျေါမှာလား?
ဖွေ – အသအေခြာကွီး ချေါမယျလို့ အာမခံခကျြ မရှိပါဘူး။
မေး – ဘာကွောငျ့လဲ?
ဖွေ – ဘာကွောငျးလဲဆိုတော့ လီဗာပူးရဲ့ ဘဏ်ဍာရေး တညျငွိမျမှုနဲ့ အပွောငျးအရှေ့ အသုံးစရိတျက စီးပှားရေးဆိုငျရာ ပါတနာတှေ၊ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျငှတှေနေဲ့ ကှငျးဝငျကွေးကနေ ရလာမယျ့ ငှကွေေးတှကေို မှီခိုနရေလို့ပါပဲ။ အကုနျလုံးက ကိုဗဈ-၁၉ ကွောငျ့ အနုတျလက်ခဏာပွမှုတှေ ဖွဈနကွေပါတယျ။ ကှငျးထဲ လူဝငျခှငျ့မရတာက ပှဲတိုငျးမှာ သနျးပေါငျး အနညျးငယျ (တဈပှဲကို ပေါငျ ၃ သနျးဝနျးကငျြ) ထိခိုကျစပေါတယျ။
Zoom ကနေ လီဗာပူးနဲ့ တှဲဘကျ စီးပှားရေး ပါတနာတှနေဲ့ ဆှေးနှေးမှုအရ စပှနျဆာကုမ်ပဏီတှေ လြော့ကလြာသလို အခြို့က အသဈ ပွနျပွငျတာတှေ၊ ညိနှိုငျးတာတှေ လုပျလိုနကွေပါတယျ။ (လီဗာပူးအသငျးရဲ့ စပှနျဆာတှထေဲက Western Union နဲ့ NIVEA men တို့ စပှနျဆာ ရပျနားတယျလို့ သတငျးထှကျထားပွီး အတညျမပွုနိုငျ၊ အခွားသော စပှနျဆာအခြို့လညျး ရပျဆိုငျးမှုတှရှေိနေ)
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘောလုံးရာသီမှာ ခနျြပီယံလိဂျကို ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျလို ကစားမလဲဆိုတာလညျး မသိရသေးပါဘူး။ ဒီတော့ လကျရှိ အခြိနျထိ ခနျြပီယံလိဂျကနေ ဝငျငှေ ဘယျလိုရမလဲဆိုတာ ဘယျအသငျးကမှ မသိသေးပါဘူး။ ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ အခွအေနနေဲ့ ပကျသကျလို့ အခုခြိနျမှာ အလုပျလုပျနတောက ခနျ့မှနျးကိစ်စတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးပိုငျရှငျတှဖွေဈတဲ့ FSG က ကလော့ပျ သဘောကနြတေဲ့ သီယဂေို အယျကနျတာရာအတှကျ အသုံးစရိတျကို သူတို့ အိတျထဲကနေ စိုကျထုတျပွီး ချေါယူပေးဖို့ဆိုတာက မခကျခဲပါဘူး။ လီဗာပူးက ကိုယျပိုငျ ရပျတညျခကျြနဲ့ပဲ ကိုယျဘာသာ ပွညျ့စုံအောငျ တညျဆောကျလိုနတော ဖွဈပါတယျ။
အပွောငျးအရှေ့ ဈေးကှကျက နောကျရာသီထဲထိ သကျတမျးတိုးနိုငျပွီး အခွအေနပေျေါ မူတညျကာ လီဗာပူးရဲ့ အခွအေနကေလညျး ပွောငျးလဲသှားနိုငျပါတယျ။ သူတို့မှာ ကစားသမားချေါယူဖို့ အသုံးစရိတျရှိပါတယျ။ ဒါက အဓိက မကပြါဘူး။ သူတို့က လာမယျ့ ၆ လကနေ ၁၂ လအတှငျး ပရိသတျမပါဘဲ ဘောလုံးကစားရမယျ့ အခွအေနမှော ကလပျရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးကို အန်တရာယျကငျးစဖေို့အတှကျ ကာလရှညျ တာဝနျယူမှုကို သခြောအောငျပဲ လုပျလိုနတောပါ။
ဒီနရောမှာ အခွားသော အသငျးတှကေတော့ လီဗာပူးမလုပျတဲ့ ကွီးမားတဲ့ လုပျခနဲ့ ထိပျတနျး လကျမှတျထိုးမှုတှကေို စှနျ့စားလုပျဆောငျဖို့ ပွငျဆငျနကွေတာ ရှငျးပါတယျ။ ကလပျအခြို့က လီဗာပူးကို လိုကျမှီဖို့ အဲ့လို လုပျလိုတယျ။ သူတို့က ဘဏျတှကေနေ စှနျ့စားမှုမွငျ့တဲ့ ငှခြေေးငှားမှုတှလေညျး လုပျဆောငျဖို့ ပွငျဆငျထားကွတယျ။ ခမျြးသာတဲ့ sugar-daddy ပိုငျရှငျတှကေလညျး ပွိုငျဘကျအသငျးတှရေဲ့ ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနေ အခကျတှကေ့မြှုတှကေို အခှငျ့အရေး ယူလိုနကွေတယျ။
လီဗာပူးကတော့ အပွောငျးအရှေ့ လှုပျရှားမှုတှကေို အလေးထားပွီး မှနျကနျတဲ့ လုပျငနျးစဉျတှနေဲ့ပဲ လုပျလိုပါတယျ။ ရရှေညျအတှကျ ရညျရှယျတဲ့ ကှငျးလယျနဲ့ တိုကျစဈသမား ချေါယူမှုတှကေိုလညျး လုပျလိုနတေယျ။ လီဗာပူးနဲ့ ကလော့ပျတို့ရဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ ရှငျးပါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျကော၊ ယူအီးအကျဖျအနေဲ့ ဖီဖာကပါ အပွောငျးအရှေ့ ဖှငျ့ခြိနျတှနေဲ့ ပကျသကျပွီး တရားဝငျ ကွညောခကျြတှေ မရှိသေးပါဘူး။ ကိုဗဈ-၁၉ ကို ရငျဆိုငျရတဲ့ တိုကျပှဲမှာ ပိုကောငျးလာတဲ့ အခွအေနကေို လီဗာပူးဘကျ စောငျ့ဆိုငျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ZAWGYI – နွေဈေးကွက်အတွက် ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေက အရူးအမူး လုပ်ရှားနေသလောက် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံကြီး လီဗာပူးကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ရှိလွန်းလှပါတယ်။ ဥရောပချန်ပီယံ၊ ကမ္ဘာချန်ပီယံနဲ့ အင်္ဂလန်ချန်ပီယံတွေအဖြစ် ဗိုလ်ဝင်ခံထားတဲ့ လီဗာပူးရဲ့ ရှေ့ဆက်မယ့် အစီအစဉ်က ဘာတွေလဲ။
လူမှုကွန်ယက်မှာ လီဗာပူးပရိသတ်တွေက ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူဖို့ အသင်းကို တောင်းဆိုပေမယ့် အသင်းနဲ့ မန်နေဂျာကလောပ့်တို့က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေခြင်းက ဘာတွေကြောင့်လဲ။ ဒါနဲ့ ပက်သက်လို့ တယ်လီဂရပ်ရဲ့ လီဗာပူးသတင်းထောက် Chris Bascombe က ဖြေရှင်းမှု ပြုလုပ်သွားပါတယ်။
လီဗာပူးအသင်း ဒီရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်မှာ ငြိမ်သက်နေတာက ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီဂရပ် မေး – ကလော့ပ်က ရာသီသစ်မစခင်မှာ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုတွေ လုပ်လိုနေသလား?
Bascombe ဖြေ – လုပ်လိုပါတယ်။
မေး – အဲ့အတွက်ကော ကလော့ပ်မှာ ရွေးချယ်ခေါ်ယူလိုတဲ့ ကစားသမားတွေရှိနေလား?
ဖြေ – ရှိပါတယ်။
မေး – လယ်လာနာနဲ့ လိုဗရန်တို့ ထွက်ခွာသွားပြီး ရှာကွီရီပါ ထွက်ခွာနိုင်ဆဲ အခြေအနေမှာ အသင်းလူစာရင်း တောင့်တင်းလာဖို့အတွက် အင်အားဖြည့်ဖို့ လိုအပ်မယ်ဆိုတာကိုကော ကလော့ပ်က သတိပြုမိရဲ့လား?
ဖြေ – သူ ဒါကို ကောင်းကောင်း သတိပြုမိပါတယ်။
မေး – လူစာရင်းကို အင်အားဖြည့်ဖို့နဲ့ အသင်းလူစာရင်းကို ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ ဈေးကွက်ဖွင့်နေချိန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အချိန်မျိုး မရှိဘူးဆိုတာကိုကော ကလော့ပ်က သတိပြုမိရဲ့လား?
ဖြေ – အသေအချာကို သတိပြုမိတာပေါ့။
မေး – ဒါဆိုရင် လီဗာပူးက လူသစ်တွေခေါ်မှာလား?
ဖြေ – အသေအချာကြီး ခေါ်မယ်လို့ အာမခံချက် မရှိပါဘူး။
မေး – ဘာကြောင့်လဲ?
ဖြေ – ဘာကြောင်းလဲဆိုတော့ လီဗာပူးရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး တည်ငြိမ်မှုနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အသုံးစရိတ်က စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပါတနာတွေ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ငွေတွေနဲ့ ကွင်းဝင်ကြေးကနေ ရလာမယ့် ငွေကြေးတွေကို မှီခိုနေရလို့ပါပဲ။ အကုန်လုံးက ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အနုတ်လက္ခဏာပြမှုတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကွင်းထဲ လူဝင်ခွင့်မရတာက ပွဲတိုင်းမှာ သန်းပေါင်း အနည်းငယ် (တစ်ပွဲကို ပေါင် ၃ သန်းဝန်းကျင်) ထိခိုက်စေပါတယ်။
Zoom ကနေ လီဗာပူးနဲ့ တွဲဘက် စီးပွားရေး ပါတနာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုအရ စပွန်ဆာကုမ္ပဏီတွေ လျော့ကျလာသလို အချို့က အသစ် ပြန်ပြင်တာတွေ၊ ညိနှိုင်းတာတွေ လုပ်လိုနေကြပါတယ်။ (လီဗာပူးအသင်းရဲ့ စပွန်ဆာတွေထဲက Western Union နဲ့ NIVEA men တို့ စပွန်ဆာ ရပ်နားတယ်လို့ သတင်းထွက်ထားပြီး အတည်မပြုနိုင်၊ အခြားသော စပွန်ဆာအချို့လည်း ရပ်ဆိုင်းမှုတွေရှိနေ)
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘောလုံးရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ကစားမလဲဆိုတာလည်း မသိရသေးပါဘူး။ ဒီတော့ လက်ရှိ အချိန်ထိ ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ ဝင်ငွေ ဘယ်လိုရမလဲဆိုတာ ဘယ်အသင်းကမှ မသိသေးပါဘူး။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေနဲ့ ပက်သက်လို့ အခုချိန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတာက ခန့်မှန်းကိစ္စတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ FSG က ကလော့ပ် သဘောကျနေတဲ့ သီယေဂို အယ်ကန်တာရာအတွက် အသုံးစရိတ်ကို သူတို့ အိတ်ထဲကနေ စိုက်ထုတ်ပြီး ခေါ်ယူပေးဖို့ဆိုတာက မခက်ခဲပါဘူး။ လီဗာပူးက ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်ချက်နဲ့ပဲ ကိုယ်ဘာသာ ပြည့်စုံအောင် တည်ဆောက်လိုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်က နောက်ရာသီထဲထိ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီး အခြေအနေပေါ် မူတည်ကာ လီဗာပူးရဲ့ အခြေအနေကလည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ကစားသမားခေါ်ယူဖို့ အသုံးစရိတ်ရှိပါတယ်။ ဒါက အဓိက မကျပါဘူး။ သူတို့က လာမယ့် ၆ လကနေ ၁၂ လအတွင်း ပရိသတ်မပါဘဲ ဘောလုံးကစားရမယ့် အခြေအနေမှာ ကလပ်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကို အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက် ကာလရှည် တာဝန်ယူမှုကို သေချာအောင်ပဲ လုပ်လိုနေတာပါ။
ဒီနေရာမှာ အခြားသော အသင်းတွေကတော့ လီဗာပူးမလုပ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ လုပ်ခနဲ့ ထိပ်တန်း လက်မှတ်ထိုးမှုတွေကို စွန့်စားလုပ်ဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတာ ရှင်းပါတယ်။ ကလပ်အချို့က လီဗာပူးကို လိုက်မှီဖို့ အဲ့လို လုပ်လိုတယ်။ သူတို့က ဘဏ်တွေကနေ စွန့်စားမှုမြင့်တဲ့ ငွေချေးငှားမှုတွေလည်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ sugar-daddy ပိုင်ရှင်တွေကလည်း ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ အခက်တွေ့ကျမှုတွေကို အခွင့်အရေး ယူလိုနေကြတယ်။
လီဗာပူးကတော့ အပြောင်းအရွှေ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အလေးထားပြီး မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပဲ လုပ်လိုပါတယ်။ ရေရှည်အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ကွင်းလယ်နဲ့ တိုက်စစ်သမား ခေါ်ယူမှုတွေကိုလည်း လုပ်လိုနေတယ်။ လီဗာပူးနဲ့ ကလော့ပ်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကော၊ ယူအီးအက်ဖ်အေနဲ့ ဖီဖာကပါ အပြောင်းအရွှေ့ ဖွင့်ချိန်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး တရားဝင် ကြေညာချက်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ ကိုဗစ်-၁၉ ကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ပိုကောင်းလာတဲ့ အခြေအနေကို လီဗာပူးဘက် စောင့်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗနျဒိုကျရဲ့ နာမညျအကွီးဆုံး အားသာခကျြကပဲ သူ့ရဲ့ အဓိက အားနညျးခကျြလို့ တိုရေး ထုတျပွော
ဘောလုံးပရိသတျတိုငျး နှဈသကျကွမယျ့ တိုကျစဈအတှဲ မွငျရခှငျ့ကို ဖကျြဆီးခဲ့တဲ့ ကိုဗဈ